34 ကျွန်တော်တို့သူငယ်ချင်းများအနေနှင့်နေထိုင်ပါက | ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ
အကယ်၍ သင်သည်“ သူငယ်ချင်းများနှင့်တွေ့ပါကဘာဖြစ်မည်နည်း” စာအုပ်ကိုသင်ဖတ်ပြီးပါက၎င်းသည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်ထုတ်ဝေသော Elizabeth Eulberg ရေးသားသောစာအုပ်ဖြစ်သည်ကိုသင်သိလိမ့်မည်။ ဤစာအုပ်သည်ဆယ်ကျော်သက်များအတွက်ရည်ရွယ်သော်လည်းပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှုအတွက်စာအုပ်လည်းဖြစ်သည်။ အရွယ်ရောက်သူ။ ချစ်ကြည်ရေးချစ်ခြင်းမေတ္တာထက်သာလွန်ပုံရသည်ဘယ်မှာချစ်ခြင်းမေတ္တာပုံပြင်, ဟုတ်သလော
သင်စာဖတ်လိုလျှင်ဤစာအုပ်နှင့် ပတ်သက်၍ သင့်အားကျွန်ုပ်တို့တစ်စုံတစ်ရာပြောပြလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်သင့်အားအောက်တွင်ပေးထားသောစကားစုများသည်သင်ဤစာအုပ်ကိုဖတ်လိုလျှင်သိရန်သင့်အားအထောက်အကူပြုသောစကားစုများဖြစ်ကြောင်းသင်သိသင့်သည်။ .. ဖြစ်နိုင်ခြေအရှိဆုံးကတော့ဟုတ်တယ်၊ သင်ဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုရှာဖို့သင်မစောင့်နိုင်တော့ပါ။
စာအုပ်မှစာပိုဒ်များ "အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်မိတ်ဆွေများအဖြစ်ဆက်နေမည်ဆိုလျှင်?"
မင်းကိုဘယ်သူမှမကြည့်သလိုမျိုးကခုန်ပါ။ ဘယ်သူ့ကိုမှမနာကျင်စေချင်သလိုချစ်ပါ၊ ဘယ်သူမှမကြားနိုင်အောင်သီဆိုပါ၊ ကောင်းကင်ပေါ်မှာကမ္ဘာပေါ်ရှိသလိုနေပါ။
အဆိုးဆုံးကတော့မင်းကိုတခြားသူတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ဖို့၊ ငါနဲ့အတူပြုခဲ့သလိုမင်းပြုံးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုမြင်ရဖို့ပါ။ ငါ့ကိုဘာကြောင့်ချစ်နေတုန်းပဲဆိုတာမင်းဘာကြောင့်ဖုံးကွယ်ထားတာလဲငါမသိဘူး။
သူမကိုရင်းရင်းနှီးနှီးရယ်မောနေတာကိုကျွန်မသဘောကျသည်။ သူ၌ရယ်မောခြင်းမျိုးနှစ်မျိုးရှိသည်။ တစ်ခုမှာပုံမှန်တဟီဟီရယ်ဖြစ်ပြီး၊ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်၌ဘဝရည်မှန်းချက်တစ်ခုတည်းသာရှိပါကသူမအားနေ့စဉ်နေ့တိုင်းရယ်မောစေမည်ဖြစ်သည်။
သူမသည်သိတယ် လူတိုင်းသိတယ် ငါတို့စုံတွဲတစ်တွဲလားဒါမှမဟုတ်ငါတို့ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေခဲ့သလားလို့လူတွေကိုမေးခဲ့တဲ့အချိန်ကတည်းကငါတို့အရမ်းခေါင်းမာတဲ့အရာကိုမြင်ခဲ့လို့ပါ။
စစ်ပွဲမှာဘယ်သူတွေအနိုင်ရတယ်ဆိုတာရှင်းနေပါတယ်။ အဲဒါဟာပြိုင်ဆိုင်မှုမဟုတ်ရင်တောင်မှကျွန်တော့်ရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကခံစားခဲ့ရတယ်။ ငါတို့မရှိတဲ့သူတစ်ယောက်ကတခြားတစ်ယောက်မရှိရင်ရှင်သန်နိုင်မှာလား။
သို့သော်“ အကယ်၍ …?” ဆိုသည့်ဂိမ်းကိုသင်ကစားသောအခါထိုမေးခွန်း၏အဖြေကိုသင်ဘယ်တော့မျှမသိနိုင်ပါ။ ပြီးတော့ဒီလမ်းကပိုကောင်းတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ "အဘယ်သို့လျှင် ... ?" အောက်မှာရှိသောကြောင့် အပေါ်ယံအရအခြားသူများ ပို၍ ဆိုးသည်။
အခြားသူများကပိုမိုသိလိုသောဤပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မည့်အစားသူသည်သူ၌နူနာစွဲနေသည့်အလားရှိသည်။ Wisconsin ပြည်နယ်ကလူတွေဟာကောင်းတယ်လို့မကြာခဏပြောတတ်ပေမဲ့ကျွန်တော်အဲဒီလိုမခံစားရဘူး။ သူကကျူးကျော်သူတစ်ယောက်လိုပဲ။
ငါတို့နှစ် ဦး စလုံးအမှားတွေလုပ်မိပြီးခေါင်းမာမာနဲ့ဝန်ခံခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါတို့တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဝေးကွာတာမဟုတ်ဘဲတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကျော်လွှားဖို့လိုတယ်
ဒီကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောညကိုကျွန်ုပ်စိတ်ထဲမှဖယ်ထုတ်ချင်သလောက်မှတ်ဥာဏ်အချို့သည်အခြားသူများထက် ပို၍ မြဲမြံသည်ကိုကျွန်ုပ်သိသည်။ အထူးသဖြင့်နာကျင်စေသောအမှတ်တရများ။
သူပြောင်းလဲသွားတယ်၊ ငါတို့နှစ် ဦး စလုံးမရှိတော့တဲ့လူတစ်ယောက်ကိုစွဲကပ်နေပုံရတယ်။
ငါဒီအခွင့်အလမ်းကိုနောက်တဖန်ဖြုန်းတီးဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့ပါဘူး။ ဒီတစ်ခါတော့ငါ့ကိုမကြောက်တော့ဘူး ကျွန်တော်မလွတ်မြောက်နိုင်ဘူး ငါဆင်ခြေမပေးဘူး
တိတ်ဆိတ်စွာရှိခဲ့သည်။ အခါအားလျော်စွာငါတို့တွေဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ် တစ်စုံတစ် ဦး နှင့်သင်အဆင်ပြေသောအခါ၊ ကွက်လပ်အားလုံးကိုဖြည့်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ငါတို့ထွက်သွားတာကိုချစ်တယ်
ထိုအခါငါသူ့ကိုတွေ့ရှိခဲ့ ... ငါ့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောထိုလူသည်ငါအသက်ရှင်ခြင်းအဘို့ငါသူ့ကိုခစျြကွောငျးရှာဖွေတွေ့ရှိကြောင်းအခိုက်အနေဖြင့်ငါ့ကိုအချစ်ဆုံးအလှဆုံးခံစားရတယ် !!! !!!
သူ၏အကြည့်သည်ပြင်းထန်ပြီးခြိမ်းခြောက်ခဲ့သည်။ ငါဖြတ်ကျော်ခဲ့သည့်နူးညံ့ဆုံးနှင့်လှပသောမျက်လုံးများ ... တစ်စုံတစ် ဦး နှင့်မိမိကိုယ်ကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြည့်စွက်ရန်ကျွန်ုပ်၌တစ်ခါမျှမဖြစ်ခဲ့ပါ၊ ...
ဒါကဘာလဲဆိုတော့…။ ထိုမေးခွန်းများ၏အဖြေကိုဘယ်သူမှမသိရှိပါ။ ပြီးတော့ဒီလမ်းကပိုကောင်းလိမ့်မယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့တွေ့ရဲ့အောက်မှာ .. ပိုဆိုးတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်။
မင်းအတွက်မရှိတော့တဲ့သူတစ်ယောက်ကိုဘာဖြစ်လို့ငိုနေတာလဲ၊ မင်းကိုသွားပြီးခွင့်ပြုပါ။ မကြာခင်မှာပဲတူညီတဲ့အကြွေစေ့နဲ့ပေးချေလိမ့်မယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါပြောခဲ့သလိုပဲယောက်ျားလေးတွေနဲ့မိန်းကလေးတွေကသူငယ်ချင်းတွေဖြစ်နိုင်တယ်။ ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေများ။ သင်၏အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းနှင့်ချစ်ခြင်းထက်အဘယ်အရာက ပို၍ စိတ်ကူးယဉ်နိုင်သနည်း။ ဘာမှမ
မင်းရဲ့သားသမီးတွေကိုငါမြင်တယ်၊ မင်းရဲ့လှပတဲ့မျက်လုံးတွေ၊ မင်းကိုကြည့်တိုင်းမင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးရှုံးရတယ်၊ ပြီးတော့လှပတဲ့အပြုံးလေးကတော့မင်းမှာရှုံးနိမ့်ဖို့အကောင်းဆုံးအရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ ငါအလှတရားအများကြီးကိုမယုံနိုင်ဘူး၊ ငါနတ်သမီးပုံပြင်ထဲမှာထင်ပါတယ်
မင်းရဲ့လက်တွေနဲ့ငါ့ကိုဝိုင်းထားစေချင်တယ်။ ငါနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာပဲရှိတယ်လို့ဟန်ဆောင်ဆက်တော့မှာမဟုတ်ဘူး။ သငျသညျ၏တစိတ်တပိုင်းဖြစ်တဲ့အခါငါ့ဘဝပိုကောင်းတယ်။ မင်းနဲ့အတူရှိနေချင်တယ်။ မင်းကိုချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်လိုမဟုတ်ပါဘူး။
သို့သော်သူမသည်ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့သောခံစားချက်မခံစားရကြောင်းထင်ရှားသည်။ အကယ်၍ သူမ၏ခင်မင်ရင်းနှီးမှုကိုခံစားလိုပါကကျွန်ုပ်တို့သည်မိတ်ဆွေများအဖြစ်ဆက်လက်ရှိနေရန်လိုအပ်သည်ဆိုပါစို့။
နေ့ချင်းညချင်းကုန်သွားတဲ့အခါငါမင်းကိုမင်းမရှိဘူး၊ နေ့ကအတူတူမဟုတ်ဘူး။ မင်းကိုငါအဆုံးမဲ့လွမ်းနေပြီ။ ငါကြည့်တဲ့ကောင်းကင်တိုင်းမှာမင်းကိုငါမတွေ့နိုင်ဘူး၊ ကြယ်တစ်လုံးပျောက်သွားတယ်၊ မင်းရဲ့အလင်းဟာမင်းနှလုံးသားထဲမှာပျောက်ဆုံးသွားတယ်။
(…) အမှန်တရားကတော့၊ သင့်အိမ်ဟာညအချိန်မှာသင်အိပ်နေရတဲ့နေရာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာပါပဲ။ သင်၏အိမ်သည်သင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်နိုင်သည်ဟုခံစားရသည့်နေရာဖြစ်သည်။ ဘယ်မှာလဲ သင်ဟန်ဆောင်စရာမလိုသည့်နေရာ၊ သင့်ကိုယ်သင်ပြသည့်နေရာ (... )
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ » နည်းလမ်း » စာပိုဒ်တိုများ » 34 ကျွန်တော်တို့သူငယ်ချင်းများအနေဖြင့်နေထိုင်ပါက